अर्थतन्‍त्र | Seto Patrika
कच्चा तेलको मूल्य पहिलो पटक शून्यभन्दा तल, तेल किन्नेले उल्टै पैसा पाउने
तस्वीरः रोयटर्स अमेरिकामा इतिहासमै पहिलो पटक कच्चा तेलको मूल्य शून्यबाट पनि तल झरेको छ। कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण मानिस घरबाहिर ननिस्कदा तेलको माग घट्न गइ भण्डारण क्षमताले नधान्ने अवस्था आएपछि तेलको मूल्य ऋणात्मक भएको हो। पहिलोपटक सोमबार अमेरिकामा कच्चा तेलको मूल्य शून्यभन्दा तल झरेको छ। अमेरिकाको बेन्चमार्क वेष्ट टेक्सस इन्टरमिडियट (डब्लूटीआई) मा सोमबार कच्चा तेलको मूल्य माइनस ३७.६३ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ। अब तेल उत्पादकले खरिदकर्तालाई कच्चा तेल किनिदिए वापत उल्टै पैसा दिने छन्। तेल भण्डारण क्षमता घट्दै गएपछि कतिपय कच्चा तेल उत्पादक कम्पनीले ट्याङ्करहरु भाडामा लिन थालेका छन्। भण्डारणमा नअटेको तेल ती ट्याङ्करमा राखिनेछ। अमेरिकी तेलबजारमा भएको मूल्यको गिरावट अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि परेको छ। अन्तराष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्टमा कच्चा तेलको मूल्य ८.९ प्रतिशतले घटेको छ। यहा...
प्रभु पेले स्मार्ट फोन नहुने विपन्न बर्गलाई लक्षित गरी मोवाइलवालेट सुविधा संचालनमाल्याएको छ । यस अन्तरगत (१२३४ अंकमा लेखिएका र एबीसीडी लेखिएका) बारफोनबाट प्रभु पेको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त सेवा युएसएसडी मार्फत मोवाइल रिचार्ज, टेलिफोन विलभुक्तानी, टेलिभिजनविल भुक्तानी तथा इन्टरनेट लगायतका विल भुक्तानी घरमा बसीबसी गर्न सकिन्छ । यसबाट रेमिट्यान्स भुक्तानीको सुविधा समेत प्रयोग गर्न सकिने छ । विशेषगरी स्मार्ट फोन नहुने विपन्न बर्गले अब आफ्नो सामान्य मोवाइल ‘बारफोन’ बाट यो सेवा संचालन गर्न सक्नेछन् । कोरोना संक्रमणको सन्त्रासकाबीच देशमा जारी लकडाउनको अबस्थामा मोवाइलवालेटबाटै समपूर्ण बैंकिङ कार्यहरु भइरहेको अबस्थामाबारफोन प्रयोगकर्ताहरु सोबाट बचितभइरहेकोले यो समयमाप्रभु पेको नयाँ सुविधा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका सरकारले समेत कोरोना संक्रमणको उ...
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित ‘आइएमई पे’ एपले “नेपालमा पैसा हातैमा पायो, सँगै रु. ५० को बोनस खायो” योजना ल्याएको छ । योजना अनुसार अब सजिलै जापानको क्योदाईबाट नेपालको ‘आइएमई पे’ मोबाइल वालेटमा पैसा पठाउन सकिने छ । यो योजना फ्रेबुअरी २२ देखि अगस्ट २२, २०२० (छ महिना) सम्म लागु गरिएको छ । यो योजना अवधिभर क्योदाईबाट नेपालमा ‘आइएमई पे’ गर्नुहुने सेवाग्राहीहरुले ३ पटकसम्म निशूल्क सेवाशूल्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ । चाहिएको बेलामा एजेन्टबाट पैसा निकाल्न सकिने र मोबाइल खाताबाट ब्याज पनि पाइने यस योजनाका फाइदाहरु रहेका छन् । यसका लागि प्राप्तकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा ‘ आइएमई पे ’ डाउनलोड गरेको हुनुपर्दछ । जापानस्थित जुनसुकै क्योदाई काउन्टरमा नेपालमा पठाउनुपर्ने रकम सहित ‘आइएमई पे’ मोबाइल वालेट खाता भएको वालेट नम्बर (फोन नम्बर) प्रदान गरि नेपालको ‘आइएमई पे’ मोबाइल व...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परम्परागत सहायता नीतिबाट हालको समस्या समाधान नहुने भन्दै अन्तराष्टिय समुदायसँग त्यसको परिमार्जनको माग गरेका छन् । मन्त्री खतिवडाले विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास संस्थालगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग शुक्रवार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको छलफलमा सो माग गरेका हुन् । हालै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरु तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरु बारे उनले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गरेका थिए । बहुपक्षीय विकास साझे...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६४ करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ५ र १० दरका नोट छाप्ने जिम्मा ‘चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेशनलाई’ दिएको हो । केन्द्रिय बैंकले ५ दरका ३० करोड थान र १० दरका ३४ करोड थान नोटको डिजाइन, छपाई आपूर्ति गर्न उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले गत जनवरी १४ मा सो नोटहरुको डिजाइन, छपाइ तथा आपूर्तिको लागि बोलकबोल आह्वान गरको थियो । उक्त बोलकबोलमा न्यूनतम मूल्यांकनमा बोलपत्र पेश गर्ने चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिइएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीसँग गत चैत २ गते १० दरका ३४ करोड थान नोट छाप्न अमेरीकी डलर ४१ लख ४० हजार ४०० र ५ दरका ३० करोड थान नोट छाप्न अमेरिकी डलर ४३ लाख ९७ हजार ५०० मा सम्झौता भएको हो । ...
काठमाडौं । यतिवेला विश्वनै कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा छ । इतिहासमै पहिलो पटक शेयर बजार लामो समय बन्द भएको छ । शेयर कारोबार यतिवेला कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्द भएको छ । वर्षको अन्तिम महिना चैत १० गतेदेखि शेयर कारोबार बन्द भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेको लकडाउन वैशाख ३ गतेसम्म जारी छ । यस आधारमा यो वर्ष १६ कारोबार दिन शेयर कारोबार हुन सकेन । विगत तीन वर्षदेखि घटेको नेपालको शेयर बजार यस वर्षभने केहि समय बढेको छ । यस वर्ष नेप्से परिसूचक १ हजार ६३२ विन्दुसम्म कायम भएको थियो । यो विन्दु नेप्सेले फागुन १५ गते कायम गरेको हो । यस दिन शेयर बजारमा १८० कम्पनीको कारोबार भएको थियो । रु. ४ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । शेयर बजारमा बढ्दा र घट्दा विभिन्न कारणहरुलाई औल्याउने गरिन्छ । कहिले अर्थमन्त्रिको चर्चा त कहिले बैंकिङ गतिविधि । मंसिर...